တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: OS ပေါင်း 38မျိုးကို Activate လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Windows Loader v2.2.1 (Latest Version)
OS ပေါင်း 38မျိုးကို Activate လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Windows Loader v2.2.1 (Latest Version)
Windows Loader လေးအသစ်ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Double Click နှိပ်ပြီး Install လုပ်လိုက် ရုံနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ Window ဟာ License ရရှိပြီး ဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဖိုင် ဆိုဒ်ကလည်းသေးသေးကွေးကွေလေးဆိုတော့ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုနိုင်အောင် ဒေါင်းယူထားစေချင် ပါတယ်ဗျာ။ Microsoft Operating systems ပေါင်း 38မျိုးတိတိကို Support လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Support လုပ်တဲ့ OS တွေကိုတော့ အောက်မှာအသေးစိတ်ရေးပေးထားပါတယ်ဗျာ။
This is the loader application that’s used by millions of people worldwide, well known for passing Microsoft’s WAT (Windows Activation Technologies) and is arguably the safest Windows activation exploit ever created. The application itself injectsaSLIC (System Licensed Internal Code) into your system before Windows boots; this is what fools Windows into thinking it’s genuine.
The things you might want to knowIt works on 32-bit and 64-bit systems
It’s compatible with Windows7SP1 and all system updates
It’s compatible with all system languages
It can work alongside Linux’s GRUB or any other boot manager
It won’t modify any system files
Note: I don’t recommend using any of the Windows7E editions.
Version 2.2.1 (01/29/2013)
Posted by အောင်မျိုး at 9:56 PM